Umbutho wezempi usudonswe ngendlebe ukuhlala ulungile - Bayede News
Ukwehla komnotho okungakaze kube khona kwelaseNingizimu Afrika
UMengameli waseChina uXi Jinping usetshele umbutho wezempi kuleli lizwe ukuthi kumele uqikelele ukuthi uhlezi ukulungele ukuya empini.
Uphawule kanje ngesikhathi ekhuluma engxoxweni ebethanyelwe abamele izinhlaka ezehlukene embuthweni wezempi emhlanganweni weSishayamthetho kuleli sonto.
“Umbutho wezempi wonke kumele uhlale ukulungele ukubhekana nazo zonke izimo ezixakile nezinzima, ngokugcwele ukuvikela izwe, ukuphepha, kanye nentuthuko,” kusho uXi.
UXi uphinde wagqamisa ukubaluleka kokuqinisa izinhlelo ezihlose ukuvikela kanye nohlelo lokubambisana nezinye izinhlaka emhlabeni uma kunezimpi.
Indlela iPeople’s Liberation Army okumele iphendule ngayo lapho kunobungozi khona kwezokuvikeleka kwezwe idingidwe abaholi kwezempi emhlanganweni weTwo Sessions.
IChina isibhekane nezinselelo ezehlukene kusukela embangweni womngcele ne-India, ukungaboni ngasolinye neJapan ngodaba lwe-East China Sea kanye nombango wezohwebo ne-USA, nokungaboni ngasolinye odabeni lwaseHong Kong neTaiwan.
Ngesonto eledlule, iChina yexwayise i-USA ukuthi iqaphele ngoba ayizimisele ukwehlela ngezansi odabeni lwaseTaiwan.
Inxuse uHulumeni kaMengameli omusha uJoe Biden ukuthi uhoxise isinqumo esathathwa ulowo obenguMengameli uDonald Trump sokweseka iTaiwan.
IChina ithatha iTaiwan, neyahlubuka kuChina ngowe-1949 njengengxenye yayo.
UNgqongqoshe Wezangaphandle uWang Yi unxuse uHulumeni wase-USA ukuthi uqonde ngokugcwele ubucayi bodaba lwaseTaiwan.
Nokho kuleli sonto, iWashington ithe izoqhubeka ifeze izibopho zayo ezeseka iTaiwan ziphinde ziqinisekise ukuthi iyakwazi ukuzivikela.
Kusenjalo, iChina ithe sizokhula ngama-6.8% isabelomali soMnyango Wezokuvikela kulo nyaka.
UHulumeni uhlele ukusebenzisa imali eyizigidigidi ezingama-$209 kulo nyaka omusha.
Isabelomali soMnyango Wezokuvikela eChina siyingxenye yokukodwa kokune emalini eyabelwa ezokuvikela e-USA njengoba imali yakulo nyaka iyizigidigidi ezingama-$740.
Oweqembu eliphikisayo e-Uganda ugqunywe endlini ngesikhathi sokhetho
Uthe kuzophinde futhi kukhushulwe imali ezofakwa kwezesayensi kanye nasekuthuthukisweni kwethekhinoloji.
Odabeni lwaseHong Kong, iBeijing ithe kubalulekile ukuthi kulungiswe ohlelo lwezokhetho ukuze kube nentuthuko kulesi sifunda.
Okhulumela umhlangano weTwo Sessions, uZhang Yesui, uthe okusanda kwenzeka kule minyaka yakamumva kuwubufakazi bokuthi lolu hlelo kumele luqiniswe kuphinde kuqinisekiswe ukuthi abantu abaphethe eHong Kong balithanda ngokugcwele izwe.
Kamumva nje, iHong Kong ibikhungethwe imibhikisho yalabo abaphikisana noHulumeni nedonse izinyanga. Umholi waseHong Kong uCarrie Lam uzwakalise ukuhambisana noHulumeni omkhulu kulolu daba lwezinguquko ezizokwenziwa ohlelweni lokhetho lwaseHong Kong.
“UMnyango Wezobulungiswa uzowuhola lo msebenzi wokwenza izichibiyelo okhethweni,” kusho uLam.
Uthe isinqumo esithathwe uHulumeni waseChina sisemthethweni futhi siyahambisana nomthethosisekelo.
nguZanele Buthelezi Mar 12, 2021